လူတွေဘာကြောင့် အသားနာခံပြီး ခန္ဓာကိုယ်အလှဆင်ကြတာလဲ ??? - ONE DAILY MEDIA
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားလုံး၏ ထက်ဝက်နီးပါးသည် အနည်းဆုံး တက်တူးတစ်ခုရှိကြပြီး လူဦးရေ၏ 11% တွင် အနည်းဆုံး အပေါက် (နား ပေါက်အပြင် အခြား) တစ်ခုရှိကြပါတယ်။ ထို့အပြင် မျက်လုံးတက်တူးထိုးခြင်း၊ အရေပြားအောက်ပိုင်း အစားထိုးခြင်းနှင့် လျှာကွဲခြင်းကဲ့သို့သော အခြားသော ခန္ဓာကိုယ် ပြုပြင်မွမ်းမံမှု အမျိုးအစားများစွာကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ လူအချို့သည် ၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မပြောင်းလဲလိုသော်လည်း အခြားသူများက အဘယ်ကြောင့် ပြောင်းလဲလိုသနည်းဟူသော သိပ္ပံနည်းကျ ရှင်းပြချက်များစွာရှိပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၏ နောက်ကွယ်ရှိ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများကို သိရှိလိုပြီး ၎င်းကို နားလည်နိုင်စေရန်အတွက် ဤအချက်အလက်ကို စုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံသည့်အခါတိုင်း၊ endorphin များကို ထုတ်လွှတ်ပြီး အပြုသဘောဆောင်သော ခံစားချက် ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ထို့အတွက်ကြောင့် လူတို့သည် ပျော်ရွှင်စရာအချိန်အဖြစ် အပေါက်ဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် တက်တူးထိုးသည့်အခိုက်အတန့်ကို သတိရကြပြီး ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ကြပါတယ်။
(၂) အနုပညာ သို့မဟုတ် ဖက်ရှင်
အချို့လူများက အလှအပအတွက် အဝတ်အစား သို့မဟုတ် မိတ်ကပ်ကို အသုံးပြုကြပြီး အချို့က ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ တက်တူးအနုပညာရှင်များက လူအများ၏ အရေပြားပေါ်အနုပညာဖန်တီးရင်း အတွေ့အကြုံပိုရလာကာ အပေါက်ဖောက်ခြင်းနှင့် အခြားကိုယ်ခန္ဓာပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကိုဆက်စပ် ဖက်ရှင်တစ်ခုအဖြစ် မကြာခဏမြင်တွေ့ရပါတယ်။
လူတိုင်းသည် တစ်မူထူးခြားသော်လည်း၊ သူတို့သည် အထူးအဆန်းဖြစ်လိုပြီး အခြားသူများနှင့် ခွဲခြားသိမြင်လိုကြပါတယ်။ ဒါက ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုများကို ဖန်တီးရန်လည်း ကူညီပေးပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို မိမိကိုယ်မိမိ ကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရသူ၊ စိတ်ထိခိုက်စရာ အတွေ့အကြုံကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသူ၊ သို့မဟုတ် အမှတ်တရတခုကို မှတ်ကျောက်တင်လိုသူများသည် ၎င်းတို့၏ အရေပြားနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ဤဖြစ်ရပ်များကို အမှတ်အသားပြုရန် ရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။
လူအချို့က ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကို စိတ်ဝိညာဉ်နိုးကြားမှုတစ်ခု အစပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ရှုမြင်ကြပါတယ်။ အချို့သော တက်တူးယဉ်ကျေးမှုများသည် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှ အရွယ်ရောက်သည်အထိ ဖြတ်သန်းမှုအဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။
နာကျင်မှုများ၊ အတားအဆီးများနှင့် ၎င်းတို့၏ တစ်ကိုယ်ရေ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွှားရန် ကြိုးစားနေကြသော လူအများအပြားကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် ။ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် မာကျောမှုကိုလည်း သက်သေထူပါတယ်။
အချို့သောလူများက သီးသန့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ပိုင်ဆိုင်လိုကြသည်။ ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဟာ နှစ်သက်သူတစ်ဦးနှင့် မိတ်ဖွဲ့ခြင်းအတွက် လုပ်ဆောင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုငိပါတယ်။ လူအချို့သည် ရော့ခ်ကြယ်ပွင့်များကဲ့သို့ အုပ်စုတစ်ခုတွင် ပါဝင်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်များကိုပင် မွမ်းမံပြင်ဆင်ကြပါတယ်။
အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ တက်တူးထိုးခြင်း သို့မဟုတ် အခြားခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအချို့ကို လေးလေးနက်နက် တွေးတောဆင်ခြင်ပြီး လုပ်သူများ ရှိသလို လူတိုင်းလဲ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ အချို့က အတွေးအခေါ်မရင့်ကျက်မှီ လုပ်မိတတ်ကြပါသေးတယ် ။ထို့ကြောင့် တက်တူးများကို ဖုံးအုပ်ထားခြင်းမျိုး ၊ ဖယ်ရှားထားခြင်းမျိုး များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ မြင်နေရပါတယ်။ အမှန်မှာ တက်တူးထိုးသူများ၏ 17% ဟာ ၎င်းတို့၏တက်တူးကို နောင်တရပြီး ဖယ်ရှားရန် စဉ်းစားနေပါတယ်
အပေါက်များဖောက်ခြင်းနှင့် တက်တူးထိုးခြင်းစသည့် အနုပညာဟာ အဆင်ပြေသည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ သင့်တွင် ရော ရှိပါသလား??
အင်တာနက်ပေါ်တွင် လူကြိုက်များနေတဲ့ (19)ရာစုကအတိုင်း ဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းကလေး